WAR CUSUB: Khilaaf Ka Dhashay Hazard Iyo De Gea Oo Sabab U Ahaa Iscasilaaddii Zidane Iyo Hadalladii Xanafta Lahaa Ee ZIZOU Ugu Jawaabay Madax Wayne Perez. – GOOL24.NET
WAR CUSUB: Khilaaf Ka Dhashay Hazard Iyo De Gea Oo Sabab U Ahaa Iscasilaaddii Zidane Iyo Hadalladii Xanafta Lahaa Ee ZIZOU Ugu Jawaabay Madax Wayne Perez.
June 6, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Tababarihii hore ee Real Madrid, Zinedine Zidane ee toddobaadkii hore go’aanka lama filaanka ah isku casilay ayaa la ogaaday sababtii ku kelliftay inuu shanadaddiisa ka qaato Los Blancos.
Zinedine Zidane iyo madaxweynaha Real Madrid, Florentino Perez ayaa si adag isku maan-dhaafay habeenkii ka horreysay iscasilaadda Zidane, kulan ay ka yeesheen qorsheyaasha suuqa ay ku gelayaan iyo ciyaaryahannada ay doonayaan inay kooxda keenaan.
Zidane ayaa u sheegay madaxweyne Perez inuu doonayo in ciyaartoyga koowaad ee uu heshiiiska la gelayo uu noqdo xiddiga Chelsea ee Eden Hazard, hase yeeshee madaxweynaha ayaa diidmo qayaxan ka hor keenay.
Perez ayaa markaas kaddib u sheegay Zidane in kooxda la keenayo goolhayaha Manchester United ee David de Gea oo muddo dheer uu daba-socday, balse ZIZOU ayaa ku adkaystay in Keylor Navas uu ku filan yahay oo aanu u baahnayn goolhaye kale.
Hadallo taag-taagan iyo khilaaf ayaa ay labada masuul habeenkaas ku dhamaysteen shirkooda, markii lasii kala tegayayna waxa uu Zidane u sheegay Perez inuu faraha ka qaadayo kooxda.
“Aniga way ii dhamaatay. Adigu maamul kooxda” Sidaas ayuu Zidane ku yidhi madaxweynaha isaga oo cadhaysan, hase yeeshee, Perez ayaa u ku dooday in Hazard ay ku adag tahay inuu u dhaqaaqo, balse goolhayaha United ee De Gea uu u fudud yahay inuu kooxda.
Isla habeenkaas ayuu Zinedine Zidane go’aansaday inuu kooxda ka tago, waxaana markiiba uu wargeliyey ciyaartoyga oo uu farriin qoraal ah ugu sheegay go’aankiisa, ka hor intii aanu la hadal Sergio Ramos.
Subaxnimadii uu warbaahinta iskugu yeedhay, waxaana shaaciyey inuu iska casilay Real Madrid.
Zidane ayaa filayey in mar haddii uu saddex koob oo Champions League ah uu ku guuleystay, in madaxweyne Perez uu ku ixtiraami doono una deyn doono in ciyaartoyga uu doono uu soo iibsado, kooxdana dibu-dhis buuxda uu ku sameeyo.
Madaxweyne Perez ayaa caan ku ah inuu gacantiisa ku go’aamiyo ciyaartoyga kooxda la keenayo. Markii ugu horreysay ee uu madaxweynaha noqday, waxa uu meel iskugu keenay Zidane oo wakhtigaas ciyaartoy ahaa, Luis Figo, Ronaldo iyo David Beckham.
Markii labaad uu kusoo laabtay xilka ugu sarreeya Real Madrid waxa uu markiiba kooxda keenay Kaka oo sidii la filayey aan noqonin, Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale oo Los Blancos ka caawiyey in shantood sannadood ee ugu dambeeyey ay afar ka mid ah qaadaan Koobka Champions League.